Ngwa kachasị mma iji mee ekele ekele ụbọchị ọmụmụ | Gam akporosis
Ngwa kachasị mma iji mee ekele ekele ụbọchị ọmụmụ
Paul Aparicio | | Ngwa gam akporo
Izu na-abịa bụ ụbọchị ọmụmụ nke enyi. Anyi anaghi eme ncheta ubochi ndia dika anyi geme n’afọ a, mana oteela aka anyi nwere ezigbo mgbapu na anyi ga eji oge a. Zọ kachasị mma iji chọọ ncheta ọmụmụ ụbọchị ọmụmụ bụ ịnọ n'anụ ahụ, mana nke a anaghị ekwe omume mgbe niile. Luckily anyị nwere anyị mobile ngwaọrụ na site na ha anyị nwere ike izipu ọtụtụ na iche iche ekele ncheta omumu.
N'ụzọ ezi uche dị na ya, ọ bụrụ na anyị enweghị ike ịsị na "Obi ụtọ ụbọchị ọmụmụ!" N’ihu onye anyị maara ma ọ bụ onye ikwu anyị, ụzọ dị mma anyị ga-esi mee ya bụ ịkpọ ha n’ekwentị, ma ọ bụghị mgbe niile ka anyị ga-amalite mkparịta ụka ka anyị nwee ihe anyị chọrọ. Ihe anyị nwere ike ime bụ ịchọ onyonyo na andntanetị ma zigara ya WhatsApp, mana anyị nwekwara ike "rụpụta ya" ntakịrị. Kedu? Ọfọn, na-adọrọ Google Play Store ma na-achọ ngwa kacha mma. Ke ibuotikọ emi anyị ga-ekwu banyere ngwa kacha mma ikele ụbọchị ọmụmụ ma ọ bụ, gịnị kpatara na ọ bụghị ihe omume ọ bụla ọzọ.
1 Daybọchị ọmụmụ ụbọchị ọmụmụ
2 Ginger 2 na-ekwu okwu
3 Nestlé Desserts
4 Slidely Show: video ekele
5 Daysbọchị ọmụmụ
Daybọchị ọmụmụ ụbọchị ọmụmụ
Anyi na-ebido n’otu onye aha ya na-akowa ya: Ubochi omumu. Echere m na site na aha a anyị nwere ike ịkele ụbọchị ọmụmụ, nri? Ọfọn, n'èzí njakịrị, ngwa a ga-enyere anyị aka zipu kaadị ekele dị ka ndị anyị nwere ike ịzụta na Post Office ma ọ bụ na ụlọ ahịa agụmakwụkwọ, mana yana nhọrọ doro anya maka ihe maka ọtụtụ, ọkachasị ndị pere mpe nke ezinụlọ, bụ ụbọchị kachasị mkpa n'afọ.
Ngwa ahụ achọghị ọtụtụ nkọwa: ga-enye anyị ụfọdụ usoro na anyị ga-eji ahaziri kaadị anyị ga-ezigara onye ezinụlọ anyị ma ọ bụ ndị anyị maara nke ọma. Nweghị ike idezi ọtụtụ, mana ị nweghị ike idezi kaadị ndị anyị nwere ike ịzụta n'ụlọ ahịa ọ bụla ebe ha dị. Ihe kacha mma banyere ngwa a? Maka ihe ọ na-enye anyị, ụgwọ ya: ọ bụ n'efu.
Developer: Ọtụtụ ngwa
Ginger 2 na-ekwu okwu
Nke a bụ kpochapụwo. Ọ nwere ike iyi nzuzu, mana ọ bụ 102% ijide n'aka na ọ ga-eme ka nwata nwoke ọmụmụ ụbọchị ọchị. Maka ndị na-amaghị, Ginger bụ nwamba ama ama na ụlọ ahịa ngwa dị iche iche nke ọrụ ha bụ kwughachi ihe anyị na-ekwu. Anyị nwekwara ike tinye uwe na ụfọdụ ngwa na ya, mana ihe masịrị anyị bụ akụkụ ya na-ekwu okwu.
Echiche bụ ihe ndị a: ọ bụ ezie na anyị nwere ike idekọ olu ọtụtụ mmadụ, nke a agaghị adị mma mgbe ihe na-ekwu bụ otu nwamba, yabụ na anyị ga-ekwu naanị otu onye ma chọọ ka ha nwee obi ụtọ ụbọchị ọmụmụ na okwu ọchị. Nwamba ga-eme ezumike, ya bụ, ọ ga-eji olu ya kwuo okwu wee gwa anyị ihe anyị gwara ya. Anyị nwere ike dekọọ vidiyo ma ọ ga-abụ vidiyo a ka anyị ga-ezitere gị ka ndi be anyi mara ya ncheta ncheta ọmụmụ ya.
Developer: Oputa7 Nwere Onwe
Nke a bụ ngwa ọzọ nke yiri ka enweghị njikọta ụbọchị ọmụmụ, nri? Nke a dị obere, mana gịnị bụ ihe mbụ na-abata n'uche mgbe anyị nụrụ ma ọ bụ gụọ okwu ahụ bụ "ụbọchị ọmụmụ"? A achicha ya kandụl, n'aka? Ọfọn, ọ bụrụ na anaghị m ehie ụzọ, ha ahapụbeghị m ka m rie achicha ahụ tupu ụzọ mbụ, mana m ga-eri ya mgbe ọ gachara. Na gịnị bụ nri ikpeazụ a na-akpọ nri ọ bụla? Dezaati.
Ebe m kọwaara ihe kpatara m ji tinye ngwa a n'etiti ngwa kacha mma iji zipu ekele ụbọchị ọmụmụ, Nestlé Postres bụ ngwa site na ebe anyị nwere ike ịkpọ ozi banyere desserts, ebe a ga-enwe usoro nri, usoro vidiyo na ụdị aghụghọ niile. Nke bụ eziokwu bụ na kaadị ndị ahụ dị mma, mana enyi ga-ahụ maka iweta achicha ahụ na ụbọchị ncheta ọmụmụ nke enyi m ọzọ ga-abụ onye mmeri n'ezie ụbọchị ahụ.
Slidely Show: video ekele
Ọ bụrụ na anyị gụọ naanị okwu ikpeazụ nke ngwa a, anyị nwere ike iche na ọ bụ ihe yiri nkata na-akparịta ụka anyị kwurula banyere ya na mbụ, mana ọ nweghị ihe jikọrọ ya na ya. Ihe dị mkpa gbasara aha ngwa a bụ okwu abụọ mbụ, nke anyị nwere ike ịtụgharị (dị njọ) dị ka ihe ngosi mmịfe.
Mụ onwe m, gbaralarị ọtụtụ afọ m, ahụla ọtụtụ ememme, n'etiti nke agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ, oriri nke ise ma ọ bụ ụbọchị ọmụmụ, na ihe ndị ọzọ. Ihe kachasị amasị m bụ mgbe niile video featuring foto nke protagonist. Nsogbu dị na nke a bụ na ọ kachasị mma ịnweta foto ọhụụ, kamakwa ọtụtụ ndị agadi n'ihi na ndị a bụ ndị na-eweta amara na mmetụta dị ukwuu maka ụbọchị ọmụmụ ụbọchị nwata na onye ọ bụla ọzọ. Ihe dị mma bụ na, ọ bụrụ na ị dị ka enyi ahụ m kwuru nke ga-eweta achicha ahụ na ụbọchị ọmụmụ nke enyi nke ọzọ ma ị chekwaa ọtụtụ foto, na Slidely Show ị nwere ike ịme vidiyo maka ụbọchị ọmụmụ ya nke ga akacha mma ekele.
Sidely Show: Video Ekele
Anyi na ejedebe n’ubochi ncheta omumu, n’agbanyeghi na ezigbo aha ya bu Happy Birthday Greetings. Ọ bụ ngwa anyị nwere ike iji ya mee ihe zipu oyiyi ekele, dị ka ndị anyị nwere ike ịchọta ma ọ bụrụ na anyị enyocha ihe na Google. Ihe dị iche na onyogho ndị a na ndị anyị ga-ahụ na Google bụ na, n'ụzọ ezi uche dị na ya, ndị anyị mepụtara ga-enwe ederede ederede anyị chọrọ.
Obi ụtọ ụbọchị ọmụmụ, GIF na vidiyo.
Kedu ngwa gam akporo ị chọrọ iji zipu ncheta ọmụmụ gị? Ọ bụrụ n'ịchọ ịchọta ngwa kachasị mma maka ihe akọwapụtara, na Tuapppara.com ha na-enweta ndepụta ndị na-adọrọ mmasị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa kachasị mma iji mee ekele ekele ụbọchị ọmụmụ
Ihe osise nke Huawei Mate 9 na Mate 9 Pro na-agbapụta
Pokémon Go emelitere na ndị a bụ akụkọ